Ubuntu obuncane CD | Kusuka kuLinux
Ubuntu obuncane CD
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa, Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Lo mbhalo wawuthi kushicilelwe ku- UTaringa ngomsebenzisi ozibiza ngokuthi petercheco futhi wangicela ukuthi ngiyibeke kubhulogi yethu. Kuyo, lo msebenzisi usikhombisa indlela yokufaka Ubuntu indlela Debian (nge-netinstall).
1 Lungiselela Ubuntu 12.04 / 12.10 Ngokushesha futhi uzinze kakhudlwana!
Lungiselela Ubuntu 12.04 / 12.10 Ngokushesha futhi uzinze kakhudlwana!
Namuhla ngizokukhombisa indlela engcono yokuthola ifayela le- Ubuntu 12.04 LTS, noma inguqulo yayo engu-12.10, izinzile impela kepha ngasikhathi sinye, ivuselelwa enguqulweni yakamuva ye- Ubuntu ngaphandle kokuhlushwa yibo bonke ububi bale distro futhi usebenzise okuhle kuphela kwayo.
Kungani ukwenze lokho? Yebo, abantu abaningi bakhononda ngokuthi ayizinzile kangakanani, ihamba kancane futhi inogaxekile Ubuntu, kodwa bambalwa abakwaziyo lokho Ubuntu kungaba inketho enhle ngempela. Kufanele wazi ukuthi ungayilungiselela kanjani ngendlela efanelekile. Sikwenza kanjani lokhu? Ake sikubone ..
Silande izithombe ze Ubuntu (i-CD encane noma i-netinstall).
Uhlobo lwe-12.04 Uhlobo lwe-12.10
Sishisa isithombe esincanyelwayo kwi-CD noma sisenze sikwazi ukubhuda ku-pendrive futhi siqiniseke ukuthi i-pc yethu ixhunywe ngekhebula kwi-Intanethi. Siqala kabusha i-PC bese siqala ukufaka.
Lapho sesifikile esikrinini sokukhetha iphakethe kanjena:
Sishiya zonke izinketho zingamakiwe bese ucindezela u-Enter. Uhlelo luzoqedela ukufakwa ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza.
Kanye eyethu Ubuntu Lokhu kufakwe ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza ongena ngemvume. Ukuze benze lokhu, baqala babhale igama lomsebenzisi bese babhala ne-password yakho. Uma sesingene ngemvume siyaqhubeka
faka iphasiwedi yakho yezimpande bese ubeka:
Uma sekufakiwe baqala kabusha, kumphathi womsebenzisi khetha ideskithophu «gnome classic» futhi uvaliwe.
Uma sebengene ohlelweni lwakho bavula ifayela le- Umphathi wephakheji ye-Synaptic (noma nge-terminal) bese ufaka lawa maphakeji ayisisekelo ukuthola uhlelo olulungiselelwe ngokuphelele ukusebenza:
$ sudo apt-get ukufaka ubuntu-limited-extras file-roller rar unrar system-config-printer cups vlc brasero kde-l10n-es okular p7zip devede libreoffice libreoffice-gtk libreoffice-l10n-es gimp gdebi gcalctool firefox firefox-locale-es thunderbird thunderbird-locale-en gconf-editor
Ngincoma nokufaka deede, umabhebhana y onqenqemeni.
Uhlelo lokusebenza olubaluleke kakhulu lokufaka abashayeli abaphathelene nabasetshenziswa Ubuntu: i-jockey-gtk.
FUTHI UKULUNGELE. Umbukwane wakho omusha sha Ubuntu 12.04 noma 12.10 kusukela manje isilungile futhi izinzile kabi ngaphandle kokufakwa kwamaphakeji we-junk kufayela le- Ubuntu okuzenzakalelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu obuncane CD
Okuthunyelwe okuhle, nokufaka i-KDE yini okufanele ibekwe? Ukufakwa okulandelayo ngizokukhuthaza ukuthi uyifake kanjena futhi sizobona ukuthi izinzile ngokwengeziwe yini!
Ukwenza ukufaka nge-KDE ufaka isistimu eyisisekelo .. Bese uqhubeka no:
apt-get -y ukufaka kubuntu-desktop -no-ukufaka-kuncoma
thola-ukufaka i-synaptic network-manager
apt-get -y ukufaka kubuntu-kuvinjelwe-okungeziwe rar unrar system-config-printer-kde izinkomishi vlc brasero p7zip devede libreoffice libreoffice-kde libreoffice-l10n-es gimp gdebi firefox firefox-locale-es thunderbird thunderbird-locale-es
Sawubona, okuthunyelwe okuhle,… usho ukuthini ngesistimu eyisisekelo, usho ukuthi ukulanda kubuntu kuncane noma vele ulande kusuka kuzixhumanisi ozibeke lapha?
Ngiqonde ukufaka kusuka kuzixhumanisi ezithunyelwe esifundweni. 🙂
Ama-nuances ambalwa. Esikhundleni se-gdebi (inguqulo ye-GTK) kukhona iphakethe le-gdebi-kde, futhi nomphathi wenethiwekhi ngokufanayo, iphakethe libizwa ngokuthi yi-network-manager-kde. I-Brasero uhlelo lokusebenza lwe-Gnome, kungakuhle kakhulu ukusebenzisa i-K3b esikhundleni. Ngalokhu sizoba nohlelo lokuhlanza futhi luhlanganiswe ngokwengeziwe.
Akungcono yini ukusebenzisa i-muon ye-kde?
I-gdebi-kde ingcono kakhulu ngaphandle kokungabaza futhi azikho izingqinamba zokuzinza 🙂
Sawubona, ngisebenzise le ndlela, ngomehluko wokuthi angizange ngiqale kwi-hard disk futhi ngafaka i-xubuntu. Lokho wukuthi, angizange ngenze izinyathelo zesithathu nezine (kufanele ngizenze?).
Ngasala ne-xubuntu 12.10 ehlanzekile, ezinzile.
Ngokusho kwesifundo, "# apt-get -y install ubuntu-desktop" kumele kwenziwe, ngabe lokhu kusishiya kuphela nemvelo "gnome classic" (gnome 2) noma ingabe kusivumela nokuthi sikhethe ubumbano? uma kungenjalo, umyalo wokufaka i-Unity kufanele ube kanjani?
Ngiyabonga kakhulu nemikhonzo.
Le ndlela ikunikeza inketho yobunye kepha ingenalutho .. akukho-applet noma i-lens. Ukuze ube nobunye kufanele ukwenze:
apt-get -y ukufaka ubuntu-desktop -no-ukufaka-kuncoma
thola-ukufaka i-gnome-panel-synaptic network-manager
ukuthola-ukufaka ubunye *
Ngibona kakhulu. Isifundo esihle kakhulu
Ngiyabonga kakhulu, ngiyajabula ukusiza 🙂
Uyini umehluko phakathi kokufaka:
Kokuthunyelwe okuhlukahlukene kunethiwekhi akuchaziwe, ngifaka i-kde-plasma-desktop futhi kune-kde encane.
Ngokufakwa kwe-kde-plasma-desktop ufaka i-kde eyisisekelo yedeskithophu eyenziwe ngabathuthukisi be-kde. Nge-kubuntu-desktop –no-install-uncoma ukuthi ufake i-kde desktop kanye ne-netbook ngezinhlelo zokusebenza ezilusizo.
ngafaka i-lubuntu esikhundleni se-xubuntu.
@petercheco, ngiyabonga kakhulu.
Futhi ukufaka umlingani? Ngibonga kakhulu
Well ufaka uhlelo lwesisekelo bese uqhubeka no:
Faka ama-Mate repos:
i-sudo engeza-apt-repository «deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu ucacise main »
i-sudo engeza-apt-repository «deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu okuyinhloko »
sudo apt-get ukufaka i-mate-archive-keyring
i-sudo apt-get ukufaka i-mate-core
sudo apt-get ukufaka i-mate-desktop-imvelo
Futhi voila 🙂
ukusebenzisa i-ppa kufanele ufake i-sudo apt-get ukufaka i-python-software-properties 🙂
Ungakwazi ukusikhombisa okubanjiwe? Ikakhulu ukubona lobo bunye "obungenalutho". Futhi usebenzisa yiphi inqama ngale ndlela?
Wadlula lapha kusho
Petercheco, usebenzisa isikhala esingakanani ngawo wonke amadeski owafakile? Umbuzo wenzelwe inkomba kuphela, ngisebenzisa owodwa kuphela, ubunye izinyanga ezimbalwa –http: //i.imgur.com/2lLBV52.png–
Phendula ngokudlula lapha
Kungithatha ngizungeze i-3gb kwi-hard drive .. 🙂
Akudingekile ukufaka ideskithophu yobuntu, ungafaka ngqo i-gnome noma i-gnome-panel (izongena kuphela kuseshini yokubuyela emuva).
Lapho usuvele uyakwazi ukuyihambisa kancane, ngicabanga ukuthi le kuyindlela engcono kakhulu yokufaka hhayi lokhu kuphela kepha noma iyiphi i-linux distro. Uthatha isikhathi esifanayo ukufaka ngesandla izinhlelo ozifunayo njengokususa lezo ongazifuni uma ufaka okuzenzakalelayo, futhi umehluko uyabonakala.
Esikhathini esithile esedlule ngafaka i-Debian ngale ndlela manje ngizozama ngamabhithi we-ubuntu 12.10 32 kepha nge-vbox ukubona ukuthi kuhamba kanjani
I-Petercheco dlulisa isixhumanisi sakho ku-taringa, angikutholi!
Ngifuna ukuphawula kulokhu okulandelayo futhi bazongitshela ukuthi kuliqiniso yini noma cha, okungenani sengivele ngikuhlolile emishinini eminingana futhi lokhu kunginikeza ireferensi yokukubeka lapha.
Kukhona ukusatshalaliswa okucatshangwe ngokuphelele nge-netbook, ngesipiliyoni sangempela ezikrinini ezincane okungekho okunye okunikezayo; imayelana: Kubuntu.
Empeleni noma yikuphi ukusatshalaliswa nge-KDE kunenketho yokushintsha kusuka kudeskithophu kuye kuNetbook-plasma. (Ishintshwa ngezilungiselelo)
Abantu abaningi bazothi i-KDE isebenzisa izinsizakusebenza eziningi futhi beyikhona, kepha ngezinguqulo zakamuva, ikakhulukazi i-4.10, yehliswe kakhulu, okwaziyo okumbalwa yilokhu engabelana ngakho:
UKubuntu ukusatshalaliswa okuhle kakhulu. Uyayifaka futhi uguqule ideskithophu ibe yi- "Kubuntu-netbook-plasma" (Izithombe ze-Google zalokhu futhi uzobona engikutshela khona). Ngemuva kwalokho, uma usufakiwe, vula ama-Muon Packages bese ufaka i- "kubuntu-fat-low-izilungiselelo" bese uqala kabusha.
Lokho okwenziwa yileli fayela ukuvala izinsiza eziningi ezisetshenziswa abambalwa futhi ezisebenzisa izinsiza eziningi, okwenza i-KDE ibe inketho enhle kakhulu yemishini enezinsizakusebenza ezimbalwa kanye nedeskithophu yeNetbook-Plasma une-GNU / Linux ephelele kakhulu yama-netbook. Futhi kulula ukucisha yonke imiphumela. Noma kunjalo eminye imiphumela eyisisekelo kwimenyu ngokuzenzakalela futhi ibukeka inkulu futhi ungasheshi umshini wakho.
NgineKubuntu 12.10 x86 efakwe ku-Acer Aspire ONE D255E engiyisebenzisela izingqungquthela, futhi ngiyixhuma kwiphrojektha yangaphandle; nge-Impress ngidlulisa amaslayidi ami; ngeGwenview ngidlula kuzo zonke izithombe (ezinamagama ezinombolo noma izinhlamvu ukuze zihleleke) futhi ngidlala nevidiyo ngeVLC. Futhi uma umshini wakho une-Bluetooth, ungabelana kalula ngamafayela noma uxhume kufoni yakho, ama-headphone akho, ikhibhodi noma igundane. Ngiphinde ngenza izingqungquthela zamavidiyo ku-Skype.
I-KDE Netbook-plasma ideskithophu enhle kunazo zonke ezake zacatshangwa futhi zaguqulelwa lawa ma-skrini amancane. Ayikho enye engcono. IWindows ayikaze isondele kulokho esinakho kwi-GNU / Linux.
Inhlanhla. Ukuhlangana Ngomlingo.
ukuthi izilungiselelo ezinamafutha aphansi zenzelwe labo abangafuni ukufaka i-net.
Zama, ngicabanga ukuthi ngalokhu kuzoba yithuba elingu-4 lokuthi nginikeze Ubuntu 12.04, ngiyethemba nje liyasebenza
hehe umnikelo othakazelisayo: 3 ngalokhu kuzoba kuhle kakhulu ukufakwa kahle ngokuya ngezidingo ze-xD ngayinye into enhle kunazo zonke kuzoba ukudala imibhalo ye-bash ukwenza ukufakwa kwendawo ngayinye hehe ngicabanga ukwenza lokhu kuhlola kwejajaj nge-ubuntu umakhi: 3
Sawubona, ngizamile ukuyifaka ngale ndlela kepha ayitholi nethiwekhi, ingitshela ukuthi amamojula enethiwekhi awatholakali. Angikwazi ukuqhubeka nokufakwa okuxhunywe ngekhebula, kepha uma ngenza lokhu nge-Debian ayikho inkinga… Iyanginaka…
Sawubona, ngicabange ukuthi izolo bengishicilele ukuphawula kwami, mhlawumbe ngiyobe ngicishe i-pc ngaphandle kokuthi ngiyithumele. Noma kunjalo, nginenkinga ngokufakwa lapho ngifika engxenyeni lapho ithola khona i-hardware yenethiwekhi, lapho ngithola umyalezo ongixwayisa ukuthi asikho isikhombimsebenzisi senethiwekhi esitholakele (kufanele kucaciswe ukuthi ngixhunywe kukhebula futhi kuyasebenza kahle, bengivele ngikwenzile ukuqinisekisa ngaphambili).
Umlayezo usho into enjengale:
“Asikho isikhombimsebenzisi senethiwekhi esitholakele. Lokhu kusho ukuthi uhlelo lokufaka alutholanga idivayisi yenethiwekhi.
Ungadinga ukulayisha imodyuli ethile yekhadi lenethiwekhi, uma unayo. Ukuze wenze lokhu, buyela emuva esinyathelweni sokutholwa kwedivayisi yenethiwekhi. "
Lapho ngifaka iDebian kusuka ekufakweni okuncane, bengikade ngilande i-firmware yebhodi lami le-Wi-Fi futhi ibisebenza ngokushesha, yize ukufakwa bekuqediwe ngenethiwekhi enentambo. Kuyangimangaza ukuthi akatholi nentambo. Uma ungangisiza, ngizojabula kakhulu. Siyabonga ngayo yonke imininingwane ejwayelekile.
kulawa macala ngishicilele okunye ukungena ku-taringa.net. Isixazululo senkinga yakho yokushayela izithombe zeseva Ubuntu. Uhlelo lwesisekelo lufakiwe kepha esithombeni esifanayo uthola abashayeli kanye nobuncane obudingekayo ..
Ukulanda i-Ubuntu 12.10 isos:
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi enze kanjani into enjalo kepha kufanele ahlole nokuthi ideskithophu ezenzakalelayo yiRazor-Qt?
Okushesha kakhulu yile:
Faka isistimu yakho yesisekelo se-Debian. Lapho usuqede ukufakwa bese ungena kwi-Debian yakho ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza okokuqala ngqa, qhubeka no:
Vula ukuphela bese ungena ngemvume njengezimpande. Bese ulandela ngo:
engeza-apt-repository ppa: razor-qt
Manje iya kwimithombo yakho yohlu
Emigqeni ehambelana ne-razor repo, shintsha i-repo's distro, ubukeke kanjena:
i-deb http://ppa.launchpad.net/razor-qt/ppa/ubuntu eqondile main
i-deb-src http://ppa.launchpad.net/razor-qt/ppa/ubuntu eqondile main
Gcina ngenhlanganisela yokhiye CTRL + O bese uvala nge-CTRL + X
apt-uthole -y dist-thuthukisa
thola ukufaka i-razorqt
Uxolo awuvuli noma iyiphi i-terminal ngoba usuvele ukuyo 😀
Ngabe othile angangitshela ukuthi usho ukuthini ngamaphakethe we-junk?
"... uzinze kabi ngaphandle kokufakwa kwamaphakethe we-junk ku-Ubuntu ngokuzenzakalela."
Ngabe usho ukuthi ukufaka Ubuntu ngale ndlela kufaka amaphakheji adingwa yi-PC yakho futhi alahle okungadingekile?
Sawubona, ngilandele lesi sifundo kuze kube yisikhathi sokungena ngemvume futhi nginenkinga yokufuna ukwazi kakhulu.
Angikwazi ukungena ngemvume nge-akhawunti yami ye-lightdm, ngifaka igama lami lomsebenzisi nephasiwedi bese ibuyela esikrinini se-lightdm futhi. ngobunye nobunyoninco obudala.
Uma esikhundleni salokho ngisebenzisa i-akhawunti yezivakashi, ngingangena endaweni yokuqhafaza ngaphandle kwezinkinga, ngokubumbana nangokwe-gnome classic.
iphasiwedi ilungile futhi kusuka esigungwini ngingena ngaphandle kwezinkinga.
Noma yikuphi ukusikisela?
njengoba imininingwane eyengeziwe engeza ukuthi ukuphela kwento "exakile" engiyenzile ukufaka / ikhaya engxenyeni ehlukile.
Akukho lutho, ungakhathazeki, angikwazi ukungabi nayo ikhompyutha. Ngizoshintsha i-distro noma okuthile.
Isifundo esihle kakhulu, siyakuhalalisela.
Bengifuna ukwazi izinto ezimbili, eyokuqala:
Ngiyayithanda i-Kde, futhi sengivele ngibonile ukuthi ngiyifaka kanjani, kepha futhi ngiyayithanda ngempela i- "look an feel" yeGnome-Shell, ukufaka i-gnome-Shell njengoba kungaba njalo:
thola-ukufaka i-gnome-shell -no-install-uncoma
Ngilungise uma nginephutha.
Into yesibili engingathanda ukuyazi, angazi, ukuthi ngabe zonke izinhlobo ezihlukile ze-Ubuntu (Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu, njll) ziphethe ugaxekile. Ngiyazi ukuthi Ubuntu (Unity) iletha i-Amazon ezophatha izingcingo zogaxekile futhi yazi ukuthi yiziphi ezinye izinto.
kahle kuwe ukuthola ukufakwa okuncane kwe-gnome ngingenza:
Ukufaka yonke into ngokuphelele ekusetshenzisweni kweqembu le-gnome:
Ngokuqondene nombuzo wakho wesibili ku-Xubuntu, vele ukhiphe i-Ubuntu Software Center bese usebenzisa iSynaptic ukwenza isibonelo.Uma ngikhumbula kahle, i-Ubuntu Software Center ifakwa ku-Ubuntu naku-Xubuntu kuphela kusukela uKubuntu esebenzisa i-Muon ne-Lubuntu uku Isikhungo sesoftware kaLubuntu. Ubuntu obunobunye kuphela obunenkinga yogaxekile.
Ungaya futhi ngokuhlukile kwe-UBuntu nge-Gnome-Shell efakwe ngokuzenzakalela ebizwa nge-Ubuntu Gnome remix:
Ngiyabonga ngokungiphendula. Ngingu-Ubuntero, ngifunde ukuthi kuncane kangakanani engikwaziyo ngalokhu kusatshalaliswa, ekuqaleni kwayo nge-gnome 2, ngibe sengiya ku-KDE (ekhangayo nsuku zonke) Kubuntu, ngiyaqhubeka nazo zombili (izingxenye ezimbili). Njengamanje ngine-Ubuntu gnome remix efakiwe njengoba ushilo (angazi ukuthi yini le gnome-shell enayo kodwa ngiyayithanda, yize kugxekwa).
Amazinyo ami aphume namaphakheji we-.deb.
Bengingazi ukuthi ngiyifaka kanjani i-ubuntu cishe ekuqaleni.
Yeka indlela enhle, sengivele ngiyizamile i-ubuntu 12.04 futhi iyashesha futhi izinzile ukwedlula inguqulo 12.10 kepha iqiniso ukuthi angithandi ubuntu ngobunye, inzima kakhulu, kungaphezu kwalokho ngicabanga ukuthi inzima njengamawindi 7, ilenga kimi, hhayi okwamanje kwi-pc yami enginayo ngine-Xubuntu enhle, futhi ngithanda kakhulu uKubuntu kakhulu.
PS: (Ngikwi-computer yaseyunivesithi) hehehehe angijwayele ukusebenzisa amawindi
Kungaba kanjani ukufaka iCinnamon ?? ... kungaba yinto enjalo?
#sudo engeza-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / sinamoni-esitebeleni
#sudo apt-uthole isibuyekezo
#sudo apt-get ukufaka isinamoni
Noma ngabe kukhona inguqulo encane yeCinnamon ??
Sawubona, faka ubuntu-12.04.2-desktop-i386, kumafasitela ane-double-boot….
kulungile kepha lapho ngikhetha ukuqala ngobuntu ngifaka kumodi ye-console ... kungani ???
Akungikhombisi indawo yokuqhafaza, ideskithophu nezinye izinhlelo zokusebenza… ..
Ngizifaka kanjani zonke lezi zinhlelo zokusebenza ... Ngiyazi ukuthi ngomugqa womyalo, ungisiza kanjani futhi ungiqondise uma usuvele unendawo yokuqhafaza namanye amamojula, yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ... Ngiyabonga kakhulu ... Ngiyabingelela ... .
Uma ulande i-iso kuzixhumanisi eziboniswe kulokhu okuthunyelwe, kungenxa yokuthi lezo zinguqulo azinayo indawo yokuqhafaza, lapho kukhombisa ukuthi ungayengeza kanjani imvelo yokuqhafaza yobuntu, futhi kumazwana ungabona ukuthi ungangeza kanjani ezinye izindawo zokuqhafaza
Angikaqondi ukuthi i-okular ibukeka kanjani phakathi kohlelo oluncane olususelwa ku-gnome.
Sawubona, ngifake kahle i-KDE ... futhi kusebenze kahle, kepha lapho ngivuselela ngishiywa ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza futhi, kufana nokuthi bengingenayo imvelo yokuqhafaza. Angazi nakancane ukuthi ngingakuxazulula kanjani lokhu, nginekhadi levidiyo le-ATI
Abantu abalungile… .install ubuntu 12.04.2 lts, ​​on windows xp sp3, through dual-boot
Ngafaka ubuntu nge-wubi.exe… ..ngama-bits angama-32… ..kodwa uma ngiqala ubuntu… .bese ngibheka ukuthi hlobo luni lwesistimu enginalo …… ngisebenzisa umugqa womyalo uname -a… .sale enginabo ubuntu 12.04.2tls x86_64… .. ithi nginohlelo lwama-64-bit… .ngoba uma ngilufakela ama-32-bit… ..Lingalimaza ikhompyutha yami ngokuba nalo kuma-64-bit …… ngoba bengihlala ngifaka ama-32-bit systems afana ne-windwos xp, kepha angazi ukuthi kungani Ngifaka kuma-64bits… ..umbuzo wami ukuthi uma ingalimaza i-PC yami, ngine-processor ye-Intel P4, ithi isekela ama-64bits, i-ms-7211 motherboard, i-1GB RAM…. I-128 MB VIDEO… .SIYABONGA ... NGEZIMPENDULO ZAKHO …….
nabantu futhi, ngidinga ukuthi ninginikeze umusa omkhulu wama-Oracle 11g namafomu e-Oracle …… ye-Ubuntu 12.04.2 lts ……. Ngiyabonga kakhulu…
Okwe-Oracle 11g sebenzisa i-CentOS hhayi ubuntu ..
UJorge Andrés Devia Mosquéra kusho
Uma ngihlala esinyathelweni sesibili futhi ngisebenza kuphela kukhonsoli, ngabe yini engiyabe ngiyifakile empeleni? Ubuntu? IKernel? Lutho?
Phendula uJorge Andrés Devia Mosquéra
Ubuntu base ngaphandle kwe-X noma imvelo yokuqhafaza 🙂
U-Osca G kusho
Isetshenziselwa ukufaka isisekelo esincane se-xfce, ngiyisho ngoba ngifuna ukufaka ubuntu obuncane nge-xubuntu minimal
kepha inkinga ukuthi ayisekeli uefi
Phendula u-Osca G
IFirefox 19 iyatholakala
[ICEBISO] Yenza iFirefox isebenzise ingqikithi yethu yesithonjana ku-KDE